हाम्रोखबर आइतबार​, चैत्र २३ २०७६
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेका नेता डा. प्रकासशरण महत शनिवार साँझदेखि एकाएक चर्चामा रहेका छन । कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका उनी कोरोना संकटको विषम परिस्थितिमा कुनै उदाहरणीय काम गरेर चर्चामा छाएका होइनन् । बेमौसमको बाँसुरी जस्तो मध्यावधिको कुरा गरेर जगलाई हसाउँदै उनी चर्चामा छाएका हुन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेका नेता डा. प्रकासशरण महत शनिवार साँझदेखि एकाएक चर्चामा रहेका छन । कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत रहेका उनी कोरोना संकटको विषम परिस्थितिमा कुनै उदाहरणीय काम गरेर चर्चामा छाएका होइनन् । बेमौसमको बाँसुरी जस्तो मध्यावधिको कुरा गरेर जगलाई हसाउँदै उनी चर्चामा छाएका हुन् । शनिबार एउटा टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा मध्यावधिको कुरा गरेपछि उनी हाँसोको पात्र बन्न पुगेका हुन ।
यसअघि सोही पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक सहमति जुटाएर कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर जग हसाँएका थिए । त्यसैको झल्को दिने गरी अहिले महतले पनि जग हँसाउने काम गरेका छन । यद्यपी उनले आफ्ना कुरा मिडियाले बंग्याएर प्रचार गरेको प्रष्टिकरण दिएका छन । तर भिडियोमा उनको मुखबाट मध्यवधिको उच्चारण भएको छ ।
निश्चय पनि प्रतिपक्षी दलको मुख्य काम भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । राम्रा कामको समर्थन र नराम्राको विरोध । विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरुमा यस्तै अभ्यास भएको पाइन्छ । त्यसैले पनि त्यहाँका प्रतिपक्षी दलहरु बलिया हुन्छन । त्यही भएर सरकार पनि प्रतिपक्षदेखि डराउँछन । तर दुर्भाग्य नेपालको सन्दर्भमा भने लोकतन्त्रको इतिहासमा नै अहिलेसम्म त्यस्तो प्रतिपक्षी दल देख्न पाइएको छैन । अहिले प्रकास शरणको नियति पनि जताभावि बोल्दाको परिणाम माने हुन्छ । सरकारको विरोध गर्ने क्रममा के बोल्दैछु भन्ने उनलाई हेक्का नै भएन ।
के सोचेर उनले मध्यावधिको कुरो झिकेर जग हँसाएका हुन् यतिबेला सिंगो कांग्रेसभित्रैबाट उनको आलोचना शुरु भएको छ । कतिपयले राष्ट्रिय संकटको घडीमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएर लज्जित नबनाउन आग्रह पनि गरेका छन । नेपाली कांग्रेस इलाम जिल्लाका सभापति हिमालय कर्माचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेताको यस्तो कुराले लज्जाबोध भएको उल्लेख गरेका छन । उनले लेखेका छन–‘नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै कुनै नेताले कहिले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा कहिले सरकारले नसक्ने भए हामीलाई भनोस हामी गर्छौ जस्ता कुरा गरेको देख्दा हामीलाई लज्जा बोध भएकोछ। अबका दिनमा काङ्ग्रेसका कुनै नेता भनाउदाले यस्ता लज्जास्पद कुरा नउठाउन नेपाली काङ्ग्रेस इलामको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु।’
उसो त डाक्टरको उपाधि प्राप्त उनी जनाधार नभएका कांग्रेस नेताहरुमध्ये एक हुन । शेरबहादुर देउवाको वरिपरि घुमेर मनोनित सहमहामन्त्री पद पढ्काउन सफल भएको आरोप उनले खेप्दै आएका छन । यस्तै पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भन्ने महासमिति बैठक र जिल्ला सभापतिहरुको निष्कर्षलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट पारि हुन नदिएको आरोप पनि उनीमाथि छ ।
कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता र शुभेच्छुक मात्र होइन अन्यले पनि डा. महतलाई चिन्ने राम्रो अवसर उनको भनाइले पाएका छन । महतको भनाईलाई हेर्दा संसदीय प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमत प्राप्त दल र उसको सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य दलहरुको काम त्यो सम्मको ज्ञान अभाव भएको जस्तो देखियो । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कांग्रेसको ध्यान सत्तामा बाहेक कतै देखिदैन ।
तर डा.महत यी सबै कुरा नबुझेका राजनीतिकर्मी त होइनन् । उनी पटक पटक मन्त्री समेत बनेका हुन । राम्रो जनाधार नभए पनि पार्टीमा सहमहामन्त्रीको पद पाएका व्यक्ति हुन् । शिक्षित र बिद्यावारिधि प्राप्त नेता हुन् । यस्ता व्यक्ति कुनैपनि पार्टीका खम्बाकै रुपमा हुन्छन । तर यस्ता बेतुक र बेमौसमको बाँसुरी जस्तो जताभावि बोल्दै हिडेपछि त्यो व्यक्तिको स्तर त गिर्छ नै त्यसले सिंगो पार्टीलाई समेत असर पुर्याउनेमा दुइ मत छैन । अनि राष्ट्रिय संकटको घडीमा मध्यावधिको जस्तो कुरा आउनु भनेको बुद्धिमा कालो बिर्को लाग्नु सरह हुन्छ ।